कोरोनाभाइरस उत्पत्तिः अमेरिकाकी गुप्तचर निकायको प्रतिवेदन ’निष्कर्षविहीन’ – Health Post Nepal
२०७८ माघ १३ गते
कोरोनाभाइरस उत्पत्तिः अमेरिकाकी गुप्तचर निकायको प्रतिवेदन ’निष्कर्षविहीन’
२०७८ भदौ १० गते १४:१४
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनको आदेशानुसार तयार गरिएको कोरोनाभाइरसको उत्पत्तिसम्बन्धी एउटा गुप्तचर प्रतिवेदन निष्कर्षविहीन रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
चीनमा पहिलो पटक देखिएको कोरोनाभाइरस जनावरबाट बाट मानिसमा प्राकृतिक रूपमा सरेको हो वा प्रयोगशालामा भएको दुर्घटनाबाट फैलिएको हो भन्ने विषयमा अमेरिकी निकायहरू एकमत हुन नसकेको बताइएको छ।
उक्त प्रतिवेदनको सारांश छिटै सार्वजनिक हुने पनि बताइएको छ। चीनका विदेशमन्त्रीले सो प्रतिवेदनलाई ‘विज्ञानविरोधी’ भनेका छन्। वाङ यीले राजनीतिक उद्देश्य मात्रै परिपूर्ति गर्ने प्रतिवेदनका लागि वाशिङ्टनले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको अध्ययनलाई बेवास्ता गरेको बताएका हुन्। संसारभरि ४० लाख मानिसको ज्यान लिएको महामारीले चीनको वुहानमा सन् २०२०मा सुरूतिर पहिलो पटक देखिएको थियो।
संसारभरि कोभिड फैलिने क्रम रोक्ने प्रयास भइरहँदा वैज्ञानिकहरू कहाँबाट भाइरस उत्पन्न भयो भनेर पनि पत्ता लगाउने प्रयास गरिरहेका छन्। वुहान भ्रमण गरेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको टोलीले यो रोग बजारमा बेचिएको जनावरबाट मानिसमा सरेको हुनसक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। सो प्रतिवेदनले एक दशकदेखि चमेरोको कोरोनाभाइरस अध्ययन गरिरहेको वुहान इन्स्टिट्यूट अफ भाइरलजीबाट दुर्घटनामा बाहिर फैलिएको हुनसक्ने सम्भावनालाई नकारेको देखिएको छ।
केही वैज्ञानिकले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गरेका छन्। गएको मे महिनामा बाइडनले अमेरिकी गुप्तचर निकायहरूलाई तथ्याङ्कहरू अध्ययन गरेर ९० दिनभित्र भाइरसको उत्पत्तिका विषयमा निष्कर्षमा पुग्न सकिने प्रतिवेदन पेस गर्न भनेका थिए। सन् २०१९ को नोभेम्बरमा वुहान प्रयोगशालाका केही कर्मचारी अस्पताल भर्ना गरिएको र चीनले अनुसन्धानमा नसघाएको विवरणका बीच बाइडनले अनुसन्धान गर्न भनेको बताइएको थियो।
तर गत जुन महिनामा न्याशनल इन्टेलिजन्सकी प्रमुख एभ्रिल हेनासले ‘निष्कर्ष ननिस्किन सक्ने’ बताएकी थिइन्। कोरोनाभाइरसको उत्पत्तिका विषयमा निश्चित निष्कर्षमा पुग्न वर्षौँ लाग्न सक्ने वैज्ञानिकहरूले बताउदै आरहेका छन्। चीनले भने हालै कोरोनाभाइरस फोर्ट डेट्रिकस्थित अमेरिकी सैन्य केन्द्रबाट उत्पत्ति भएको हुनसक्ने बताउन थालेको छ। पहिले अमेरिकी जैविक हतियारको केन्द्र रहेको फोर्ट डेट्रिकमा अहिले इबोला र बिफरजस्ता भाइरसको अध्ययन गरिरहेका प्रयोगशालाहरू छन्।
चीनका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेन्विनले बुधवार पुनः सो विषय उठाउँदै अमेरिकाले पहिले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका विज्ञहरूलाई फोर्ट डेट्रिकका अध्ययनका लागि बोलाउनुपर्ने बताए।
अमेरिकी प्रतिवेदन सोमवार राष्ट्रपति बाइडनलाई बुझाइएको थियो। ह्वाइट हाउस प्रवक्ताले सो प्रतिवेदनको सारांश सार्वजनिक गर्न केही दिन लाग्ने बताए।
यी दुई लक्षण जो ओमिक्रोन संक्रमित अधिकांशलाई देखिन्छ
संक्रमित ज्यान लिएर वीरमा ‘वीरता’ देखाइरहेका डा. थापा र मेहता
सिके राउतका कार्यकर्ताद्वारा डाक्टरमाथि निर्घात कुटपिट
एउटै विभाग दुई टुक्रा भएपछि आइओएम–जिप्यान द्वन्द्व : एक पछि नहट्ने अर्को तालाबन्दीमा उत्रिने
वीरको प्रमुखमा डा. लोहनीको सरुवा रोकियो, डा. भुपेन्द्र यथावत
राप्ती प्रतिष्ठानमा ‘योग्यता नपुग्ने’ व्यक्तिलाई उपकुलपति नियुक्त गर्न चलखेल
८ हजार १७ कोर‍ोना संक्रमित थपिए, १५ जनाको मृत्यु
सिटामोल पाउनुभएन?, विभागअघि जानुस्, नि:शुल्क लिनुस् [तस्बिरहरु]
डाक्टरमाथि आक्रमण गर्ने सिके राउतका कार्यकर्तामाथि कडा कारबाहीको माग
फाइजरपछि मोडेर्नाले पनि सुरु गर्‍यो ओमिक्रोनविरुद्ध बुस्टर डोज ट्रायल
भारतमा थपिए २ लाख ८६ हजार कोरोना संक्रमित
धेरै प्रतिशत खोप लगाउने मुलुकको सूचीमा नेपाल पनि
भेरी अस्पतालमा दुई कोरोना संक्रमितको मृत्यु
थप ८ हजार ४५४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
प्रकाशक/प्रधानसम्पादक: सुन्दर खनाल
सम्पादक: दीपक दाहाल